nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #965
Mgbe m na - ebudata ụfọdụ ụgbọelu dịka Martin Marauder C47 Boeing Superfotress M na - enweta ọrụ n'ime ụgbọelu na - egosi.
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #966
View na-agba ntụle DX9 ma ọ bụ DX10? You na-agba FSX Steam ma ọ bụ igbe? Ọ bụrụ na Boxed na-agba ọsọ ma ọ bụ na-enweghị osooso? Kedu ụdị windo ị nwere?
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #967
Ana m agba ọsọ DX11 na windo 7 ọkachamara na ụdị kwụ ọtọ nke FSX. Apụla m ezumike nká na m na-alaghachite inti ụgbọ elu sims mgbe agụụ mmụọ gasịrị, enwere m mbibi. Mana achọpụtara m websaịtị a ọfụma na ọtụtụ nbudata ndị a yiri ka ha na-arụ ọrụ dị mma. Ọ dị mwute na ọ bụ ndị ị nwere mmasị na nke ahụ
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #968
Nnọọ ọzọ ...FSX n'ime menu nhọrọ gị nwere ike ịgba ọsọ na DX9 ma ọ bụ DX10 Preview / Mgbe FSX E kere ya, ọ bụ tupu ntọhapụ nke DX10, mana ọ na-agba na DX9 na ndabara. Gaa na menu nhọrọ gị ma hụ na enyochaghị ihu ntụpọ DX10. Aircraftgbọ elu Rikooo na-agba DX9 na ndabara. Arefọdụ nwere DX10 dakọtara ma ọ bụrụ na ha ga-abụ nkọwa ahụ. Enwere atụmatụ a na-akwụ ụgwọ dị na ya iji mezie nyocha DX10, mana ọ gwụla ma ịzụrụ ihe mmemme ahụ, ọ ka mma ịgba ọsọ FSX na DX9. Nhọrọ nke ntụpọ DX10 anaghị arụ ọrụ nke ọma, ọ na - enwe mmetụta ederede. Windows 7 bu ulo oru siri ike FSX na nke ahụ bụ ihe m ji efe simulation. I kwuru na ị na-agba ọsọ kwụ ọtọ FSX. Ọ bụrụ n’ịghọta ikike a ọ pụtara na ị nwere otu n’ime mbipụta igbe izizi ewepụtara, ma ọ bụ ụdị deluxe. Ọ bụrụ na ọ bụ ya ka ị ga - eme ka etinye SP1 na SP2, ma ọ bụ itinye mgbakwunye ga-agbakwunye. Enweghị nke ahụ, ọtụtụ n'ime freeware ọhụrụ na payware ga-enwe nsogbu ederede. Enwere m FSX Mpempe ọla edo nke na-abịa na diski osooso. O yikarịrị ka ị ga - achọpụta na ọ gwụla ma ịchọrọ itinye akara ngosi DX10 mgbe ị na - ebugharị ihe omume ahụ, nsogbu bụ na FSX esoghị na ngwugwu ọrụ achọrọ. Mee ka m mara ... Daalụ
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #971
Ụjọ! Ana m ekele gị maka ndụmọdụ na ndụmọdụ dị mma. Download SP 1 & SP2 dị ka ị tụrụ aro ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma ugbu a. Ana m ekele gị ọzọ.
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #972
Ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a, iji nyere ibe anyị aka ịnụ ụtọ ntụrụndụ anyị,
Obi ụtọ na ala
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: ike
nbudata ụgbọelu ndị na-adịghị egosi akwa akpụkpọ anụ bụ Matin Marauder na-egosi naanị 2 afọ 4 ọnwa gara aga #974
Oge ike page: 0.230 sekọnd